Mogadishu Journal » 2019 » May » 8
Mjournal :-Dowladda Ethiopia ayaa shaacisay in degaanka Soomaalida laga helay keyd Gaaska Dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 Trillion Cubic Feet. War ka soo baxay wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in Shirkad dhinaca Tamarta ah oo laga leeyahay dalka...
Maareeye oo la wareegay xilka Wasiirka Warfaafinta
Mjournal :-Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maanta xilka kala wareegay Wasiirki hore Daahir Maxamuud Geelle. Xilwareejinta ayaa waxaa kasoo qeyb galay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda...
Askari dil u geystay darawal mooto bajaaj oo gacanta lagu dhigay
Mjournal :-Barqanimadii Maanta ayaa Askari ka tirsan Ciidamada Booliiska Soomaaliya waxa uu Darawal mooto bajaajle ahaa ku diley Isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan halka qof kale uu dhaawacay,waxaana la sheegay in askarigaas gacanta lagu dhigay. Taliye ku xigeenka Ciidanka...
SAWIRO:-Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD oo shir aan caadi aheyn u furmay
Mjournal :-Magaalada jubba ee caasimada dalka Koofurta Sudan ayaa waxaa ka furmay shirkii aan caadiga ahayn ee 67 ee wasiirada arrimaha Dibada dalalka IGAD kaas oo looga hadlayo arrimo ay ka mid tahay dhameys tirka heshiiskii Dhinacyada Koofurta Sudan ay gaareen. Mas’uuliyiinta...
Mjournal :-Sida ay laga soo xigtay Wakaaladda Wararka ee AP, madaxda ciidanka booliiska gobolka Colorado ee dalka Maryakanka ayaa sheegay in labo qofi ay ku dhaawacantay weerar toogasho ah oo ka dhacay dugsi ku yaalla magaalada Highlands Ranch. Xafiiska Sheriffka ee degmada...
Mjournal :-Cadow Cabdulle Axmed (Carab) ayaa loo heystaa u daabulidda hubka iyo rasaasta nuucyadooda kala duwan Al-Shabaab, Ciidamada Amniga ayaa gacanta ku dhigay, wixii xilligaasi ka dambeeyay Hey’adaha baarista ayaa ka fushaday howlahooda baarista iyadoo Xafiiska Xeer...
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale hor-yaala Ajandaha Sharciga Batroolka
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankoodii caadiga ahaa, iyadoo uu hor-yaala Ajandaha Sharciga Batroolka oo dhowaan loo soo gudbiyay, kaasoo ay marinayaan akhrinta labaad. Xogheynta Baarlamaanka ayaa xalay ku wargeliyay...
Mjournal :-Maamulka Gobolka Nugaal ayaa soo saaray amar ku saabsan in aan shir uusan ogeyn Maamulka lagu qaban karin Hotelada iyo Xarumaha Jaamacadaha, iyadoo aan fasax ama ogolaansho loo heysan. Warqad ka soo baxday Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Nugaal oo ku taariilkheysneyd 6...
Mjournal :-Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa xalay taariikh cajiib ah ku samaysay Anfield, kaddib markii ay 4-0 ku xasuuqday kooxdii 3-0 ku soo garaacday ee Barcelona -waxayna Liverpool si aan la rumaysan karin ugu soo baxday kama dambeysta tartanka UEFA Champions league....